ပုံသဏ္ာန်တစ်ခုသို့ခရီးသွားခြင်းနှင့်တည်းခိုခြင်း - ငွေတစ်မျိုးတည်း၏နှစ်ဖက်စလုံး | ခရီးသွားသတင်း
ခရီးသွားသတင်း | | ခရီးသွား
ခရီးသွားခြင်းသည်ကမ္ဘာ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများတွင်အဘယ်အရာဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုရှာဖွေရန်၊ လေ့လာရန်နှင့်သိရှိရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လူများစွာသည်သူတို့၏အားလပ်ရက်များနှင့်လေယာဉ်ပေါ်တက်ရန်နှင့်အထူးခရီးစဉ်အတွက်အချိန်ဖြုန်းနေကြသောကြောင့်အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ။ သို့သော်ထို့အပြင်ခရီးသွားခြင်းသည်ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ရန်အတွက်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ အားသွင်းဘက်ထရီနှင့်အတူပြန်လာပါ။ ဤကျယ်ပြန့်သောအလေ့အထသည်အားကစားကိုနှစ်သက်သူများအတွက်ဖြစ်သည် အနားယူခြင်းနှင့်သင်၏ဝါသနာကိုခံစားခြင်းတို့အတွက်အကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်ခြင်း.
ဤအကြောင်းကြောင့်ယခုဆောင်း ဦး ရာသီရောက်ပြီနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အေးအေးဆေးဆေးချဉ်းကပ်လာသည်နှင့်အမျှအားကစားအများစုအတွက်အကောင်းဆုံးသောအားလပ်ရက်များသည်နောက်ကွယ်တွင်ရှိသည်။ Esquiades.com နှင့်အတူ Caldea တွင်ကမ်းလှမ်းချက်များ.
1 စပိန် - စပိန်လူမျိုးများအတွက်ခရီးသွားနိုင်ငံလည်းဖြစ်သည်
စပိန် - စပိန်လူမျိုးများအတွက်ခရီးသွားနိုင်ငံလည်းဖြစ်သည်
စပိန်အသင်း၏ခရီးစဉ်သည်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်တိုးပွားလာသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်သည်စံပြနံပါတ်များဖြင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သော နှစ်မှစ၍ ဤဥပမာ၏စံနမူနာကောင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသားစာရင်းအင်းဌာနမှနှစ်စဉ်ပြင်ဆင်ထားသောဌာနေခရီးသွားလုပ်ငန်းစစ်တမ်းအရစပိန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သူများသည်စုစုပေါင်းခရီးစဉ် ၁၉၇.၃ သန်းရှိသည်ဟုဆိုသည်။ ဤကိန်းဂဏန်းများသည်က ၂% တိုးတက်မှု ယခင်တစ်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ထိုခရီးစဉ်များထဲမှ ၉၀% ကျော်ကိုစပိန်ပိုင်နက်အတွင်း၌ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးယုတ္တိဗေဒ၏အဖြစ်မှန်ကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ စပိန်သည်စပိန်လူမျိုးများအတွက်လည်းခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်အပန်းဖြေနေရာများဖြစ်သည်။ အမှန်တရားကတော့ငါတို့နိုင်ငံမှာယဉ်ကျေးမှု၊ သမိုင်း၊ ,ရာမ၊ ဤသည်နောက်ဆုံးအမျိုးအစားသည်မကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်များအတွင်းအရှိန်အဟုန်မြင့်တက်လာခဲ့သည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ ၀ င်ရိုးများစွာထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုခရစ္စမတ်အားလပ်ရက်များ၌ကောင်းစွာသက်သေပြနိုင်သည် ဆီးနှင်းအားကစားနှင့်အပန်းဖြေခြင်းတို့သည်လက်ချင်းချိတ်။ သွားကြသည်.
ရုံကြည့်ပါ Esquiades.com ဆောင်း ဦး ရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီခရီးသွားလာခြင်းများသည်နေ့၏အစီအစဉ်ဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးရန်။ ဒါပေမယ့်လည်းဒီအားလပ်ရက်အားကစားနှင့်နီးကပ်စွာဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ဒီကိန်းဂဏန်းများအရစပိန်နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းများသို့ visitors ည့်သည်အရေအတွက်မှာပြီးခဲ့သည့်ရာသီက ၅.၈ သန်းရှိခဲ့ကြောင်း Ski နှင့် Mountain Resorts ၏ခရီးသွားအသင်းမှလေ့လာမှုအရသိရသည်။ ဤအချက်အလက်များသည်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တိုးမြင့်မှု ၇% ကျော်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဒါကြောင့်မင်းကမင်းအားလပ်ရက်အနားမှာနေလို့မရဘူးလို့ပြောတယ် တစ်ချိန်တည်းမှာအားကစားကစား?
နှင်းလျှောစီး၏အထူးကိစ္စတွင်, ကလေ့ကျင့်ချင်သောအကြောင်းပြချက်များပြားခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်, သူတို့တွင်ဤအားကစားလူသားမြားသညျငါတို့ကိုဆောင်တတ်၏အားသာချက်များကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ဒီနေရာမှာအရေးအပါဆုံးအချို့ကို:
ဒါကြောင့်ဆောင်တတ်၏အဆက်ပြတ်ဖြေ - ပြတ်တောက်ခြင်းနှင့်လွတ်မြောက်ခြင်းသည်များသောအားဖြင့်အားလပ်ရက်များတွင်လူအများသတ်မှတ်ထားသည့်ပန်းတိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသဘောမျိုးဖြင့်နှင်းလျှောစီးခြင်းသည်အလွန်ထိရောက်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အားကစားကိုလေ့ကျင့်ရန်လိုအပ်သောကြောင့်အားကစားလေ့ကျင့်ခြင်းပါ ၀ င်သောပြတ်တောက်မှုကြောင့်သာမကဆီးနှင်းများဖုံးလွှမ်း။ သဘာဝအလယ်၌အိပ်မက်မက်သောနေရာများသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များတွင်ကွင်းကွင်းဖန်တီးပေးလေ့ရှိသည်၊ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်တာဝန်ဝတ္တရား။ ဥပမာအားကစားခန်းမတစ်ခုသို့မဟုတ်တံခါးပိတ်ထားသောအားကစားများတွင်လေ့ကျင့်ပါကထိုခံစားချက်ကိုရရှိရန်ပိုမိုခက်ခဲသည်။ အားလပ်ရက်အပြီးမှာအားကစားကိုလုပ်ပြီးအားသွင်းထားတဲ့ဘက်ထရီတွေနဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်းပြန်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်။
သုခချမ်းသာအားကစားလေ့ကျင့်ခန်းသည်အထူးအာရုံခံစားမှုများစွာရရှိစေသည်။ ၎င်းစွမ်းဆောင်ရည်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ adrenaline မည်သို့မြင့်တက်လာသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လှုံ့ဆော်မှုသည်အမြင့်ဆုံးမည်မျှရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ခံစားရနိုင်သည်။ ထိုနည်းတူစွာ၊ တခါပြီးသည်နှင့်၊ အားကစားလေ့ကျင့်ခြင်းသည်များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားအခြားနည်းများဖြင့်အောင်မြင်ရန်ခက်ခဲသောစိတ်ငြိမ်သက်မှုနှင့်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်လူသားများအားလပ်ချိန်၌အားလပ်ချိန်များတွင်အချိန်ဖြုန်းချင်သောအဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အားကစားသည်မိမိကိုယ်ကိုစိန်ခေါ်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့ကိုကျော်လွှားရန်အလွန်စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေကျန်းမာရေးသည်မည်သည့်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်မဆို ဦး စားပေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဖျားနာခြင်းနှင့်ကျန်းမာခြင်းမရှိခြင်းတို့အတွက်စိုးရိမ်မှုများမှာအလွန်ကြီးမားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီအတွက်လူအတော်များများဟာအားကစားကိုပြန်သွားကြပြီးဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ကြီးမားတဲ့အာမခံချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နှင်းလျှောစီးခြင်းကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့လေ့ကျင့်နေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည်၊ ပုံမှန်အားဖြင့်ကြွက်သားများကို deoxidizing လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာစနစ်ကိုတိုးတက်စေသည်။
နေရာအသစ်များရှာဖွေခြင်းဖြေ - အားကစားကိုမသုံးဘူးဆိုရင်ကြည့်ဖို့ခက်ခဲတဲ့လှပတဲ့နေရာတွေရှိတယ်။ နှင်းလျှောစီး၏ကိစ္စတွင်ကသိသာသည်။ ကားများစီး။ သွားရန်မဖြစ်နိုင်သည့်လှပသောဆောင်းရာသီရှုခင်းများကိုလှည်းစီး။ သာကြည့်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသဘာဝနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိရန်နှင့်၎င်း၏အပင်နှင့်အပင်နှစ်မျိုးလုံးကိုသိရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » တူညီသောအကြွေစေ့၏နှစ်ဖက်: အသွင်သဏ္ဌာန်ကိုခရီးသွားလာခြင်းနှင့်တည်းခိုခြင်း